Shiinaha warshad axdi qarameedka CNC iyo soosaarayaasha | Lead
Milling CNC waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah marka loo eego hababka kale ee wax soo saarka. Waa kharash wax ku ool ah socodsiinta gaagaaban. Qaabab isku dhafan iyo dulqaadasho cabbir sare leh ayaa suuragal ah. Dhamaadyo siman ayaa lagu gaari karaa. Mashiinka CNC wuxuu soo saari karaa ku dhowaad 2D ama qaab kasta oo 3D ah iyada oo la bixinayo in qalabka wax lagu gooyo ee wareega uu gaari karo walxaha laga saarayo. Tusaalooyinka qaybaha waxaa ka mid ah qaybaha mashiinka, qalabaynta caaryada, farsamooyinka isku dhafan, xirmooyinka, iwm.
Milling Computer Numeric Controlled (CNC) Milling waa nidaam farsameyn oo ugu horeyn loo adeegsado Warshadaha Saliida iyo Gaaska. Milling CNC waxay isticmaashaa qalab goynta wareegga oo la mid ah qodista, farqiga u dhexeeya ayaa ah inuu jiro gooye u dhaqaaqaya faasas kala duwan oo abuuraya qaabab badan oo ay ku jiri karaan godad iyo godad. Waa qaabka guud ee Mashiinka Xakamaynta Tirada Kumbuyuutarka maadaama ay qabato shaqooyinka mashiinnada qodista iyo leexinta labadaba. Waa habka ugu fudud ee helitaanka qoditaanka saxda ah ee dhammaan noocyada qalabka tayada leh si loo soo saaro alaab ganacsi.
Farqiga u dhexeeya Milling CNC iyo CNC Turning
Milling CNC iyo CNC Turning waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay abuuraan qaabab kuna daraan faahfaahin biraha aan suurtagal ahayn in gacanta lagu sameeyo. Milling CNC wuxuu adeegsadaa amarro, nambarro kumbuyuutar lagu diyaariyey oo lagu wado inuu socdo. Mashiinka ayaa markaa qodaya oo u weecinaya faasas si uu u jaro qalabka cabbiraadaha soo galay kombuyuutarka. Barnaamijyada kumbuyuutarka ayaa u oggolaanaya mashiinnada inay sameeyaan goyn sax ah, dadka isticmaala waxay gacanta ka adkaan karaan Mashiinnada CNC si loo yareeyo ama loo dedejiyo howsha.
Taa bedelkeeda, CNC Turning waxay isticmaashaa mashiinno kumbuyuutar lagu xakameeyo si loo abuuro badeecad kama dambeys ah oo ka duwan. Nidaamku wuxuu adeegsanayaa qalab hal dhibic goyn ah oo galiya isbarbar dhiga maaddada la jarayo. Maaddadu waxay ku wareegsan tahay xawaaraha isbeddelka iyo goynta qalabku si ay u abuuraan jaritaanno goobeed leh cabbiraad sax ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro saamiyada wareegsan ama tubular ah qaybaha waaweyn. Waa nidaam otomaatig ah oo xawaaruhu wuxuu noqon karaa hagaajin loogu talagalay saxsanaanta weyn halkii laga rogi lahaa lathe gacanta.
sideed Okuma MA-40HA Xarumo Qalabaynta Horizontal (HMC)
afar Fadal 4020 Xarumaha Mashiinka Vertical (VMC)
hal Okuman Genos M460-VE VMC oo lagu qalabeeyay nidaamyada ka saarista qashin iyo qalab beddelaad otomaatig ah
Qaabab: Sida aad u baahan tahay
Baaxadda cabbirka: dhexroor 2-1000mm
Waxyaabaha: Aluminium, Bir, Bir Daxal Ah, Titanium, Brass, iwm
Dulqaad: +/- 0.005mm
OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa.
Adeegyo dheeraad ah: Mashiinka CNC, CNC leexinta, Ku tumashada birta, Birta xaashida, Dhamaaday, Qalabka, iwm
Hore: Warshadaha Codsiga
Xiga: CNC leexinta